Home Aragti-doon Siyaasadda waxay leedahay dan joogto oo keliya!
Siyaasiyiinta cadow isuma ahan, balse dantooda ayey radiyaan!!!
Wejiga qarsoon ee siyaasadda. | UNSPLASH
Sida lagu barto cilmiga xiriirka caalamiga ah, ma jiro saaxiib ama cadow joogto ah, balse waxaa jiro dano joogto ah oo keli ah.
Sidoo kale, odhaahdan oo ka soo billaabatay Britain, waxaa adeegsado siyaasiyiinta caalamka, iyagoo cudurdaar u yeelaya siyaasadahooda iyo ficilladooda.
Tusaale, Jarmalka iyo Japan, cadowgooda wuxuu ahaa Mareykanka, xilligii dagaalkii labaad ee dunida. Balse hadda xulafo ayey la yihiin, waxayna cadow isu yihiin Shiinaha iyo Ruushka oo xilligaas ay saaxiibbo ahaayeen.
Arrintan meel kasta ayey ka jirtaa, sida xiriirka, siyaasadda, bulshada, iyo xitaa mararka qaar shaqsiyad ahaan.
Dalkasta waxaad ku arkeysaa siyaasiyiin daacad u ah madaxweyne kastoo yimaada, waxayna la colloobaan ama mucaarad ku noqdaan madaxdii hore.
Iyaga way la jaanqaadayaa xukuumad kasta iyo siyaasadeheeda, xitaa haddii ay wax cusub la timaado.
Warbaahinta iyo meel kasta ayey ka hadlayaan oo ku taageerayaan dowlad hadda jirta oo marka ay dhacdo mucaarad ku noqon doonaan, waxna ka sheegi doonaan.
In kastoo diinta Islaamka ay siyaasiyiinta ka bartaan in isbedbedelka iyo khiyaanada aysan wanaagsanayn, haddana taas waa caado, sida lagu xusay warbixin ay qortay Jaamacadda Cambridge.
Dal kasta oo caalamka ah wuxuu leeyahay shuruuc iyo siyaasado aan is bedelin. Tusaale, Mareykanka wuxuu leeyahay siyaasad joogto ah oo ku saabsan Shiinaha iyo Ruushka. Taa isma bedesho, inkastoo madaxweyne oo saaxiib la noqon karo dalalkaas.
Sidoo kale, arrimaha la xiriira heshiisyada, amniga qaranka iyoi arrimo kale, ayaan bulshada loo soo bandhigi Karin. Qaarkoodna madaxweynaha keliya ayaa og. Balse kuwa kale, aragti ahaan way isbedelayaan.
Dhammaanteen waan garaneynaa dad markasta siyaasadeysan. Waxay ka hadlaan naceybka ay u qabaan dhinaca kale. Waxay difaacan asxaabtooda siyaasadda.
Xitaa haddii aad isku daydo in aad meel kala casheyso, waxay kuu billabayaan khudbo dheer, sida in ay kja qeybgalayaan barnaamij siyaasadeed ka baxaya telefishin ama idaacad. Markaas oo kale xusuusi in wax caadi ah laga sheekeeyo.
Waxa la yaabka ah waa in isla qorfkaas haddii aad aragto xilli dowlad kale ay soo gashay, middii uu taageerayayna ay dhacday, in uu haddana kuu jeediyo khudbad kale, sida in uusan is xusuusanin.
Sida uu qoray machadka AIER, loolan siyaasadeed aan wanaagsanayn ayaa xilligan jiro oo caddeyn loo hayaa.
Waxaa jiro arrimo iska soo horjeeda, inkastoo ay kuula muuqato in dunida oo dhan ay ka hadleyso nabad, ganacsi iyo horumarka qof kasta. Balse, waxaa si hoose u socda burburin, guul iyo xukumid.
Waxaa iska soo horjeeda dad sheegayana nabadda iyo ganacsiga iyo kuwa lagu tilmaamay rabshooleyaal iyo burcad. Laakiin, labada dhinacb waxay kala sheeganayaan raadinta wanaagga.
Haddaba, sida aad farxadda iyo wanaagga ku heli karto waa in aadan ku milmin siyaasadaha is diidan, sababtoo h, ddkaas siyaasiyiinta ah iyagaa beri saaxiibbo noqon doono, qofka shacabka ah ayaan ku dhib qabaya khilaafkooda.
Siyaasadda saaxiib joogto ah ma lahan! Kuwa hadda isugu wanaagsan ayaa beri cadow isu ah. Sidoo kale, siyaasadda cadow joogto ah ma lahan! Kuwa manta is dilaya ayaa beri saaxiibbo noqonaya.
Previous articleFaa’iido ma leedahay xanta goobta shaqada?
Next articleMucjisooyiinka ay leedahay Toonta iyo faa’iidadeeda